प्रबासमै बसेर संगितमा लागेका सल्यानी गायक रेमो याजको यस्तो छ सांगीतिक यात्रा ?
माघ २२, मलेसिया ।
सल्यान जिल्लाको एउटा बिकट गाउँमा जन्मिएका सर्जक तथा सल्यानी गायक रेमो याज रैन घर्ती मगर अहिले बैदेशिक राजगारकाे लागी मलेसिया छन् ।
सानैदेखि गित संगितमा धेरै रुचि भएपनि केेेेहि घरगुजाराकाे लागी उनि मलेसिया पुगेका हुन् । तर नेेेपालमा हुुुुदा उनी स्कुुुलमा होस वा गाउँघरमा तथा कुनै कार्यक्रम, पुजा पाठ, बिहे लगाएतका ठाउँहरुमा सहभागिता जनाएर गीत गाउने गर्दथ्य । घरको पारिवारिक स्थिति र कुनै त्यस्तो उचित वातावरण नमिलेको कारण उनि आज करिब ३ देखि खाडीमा रहेका छन् ।
पहिले रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया प्रस्थान हुनुपरेको तितो एथार्थ सुनाउदै,गायक रेमो याज रैन भन्छन् मलेशिया आउनुुुुपर्ने रहर होइन मेरो बाध्यता थियो।
खाने मुखलार्इ जुँगाले छेक्दै भने झै अहिले उनि मलेसिया स्थित के.एल. सहर को एक साधारण कम्पनी मा काम्दार गर्दै बचेको खालि समयलाई गीत संगीतमा खर्चिएका छन् । संगीतिक क्षेत्रमा केही गर्छु भन्ने आफैमा आसाबादी भएर गीत संगितलाई माया गर्ने उनि बताउछन् । नेपालमै रहदा साना ठुला कार्यक्रम भाग लिएका दिनहरुलाइ सम्झदै उनिले त्यहि भएर परदेशमा पनि गाउँ घरको झल्को मेटाउन गीतहरु निरन्तर गाउँदै अाएका छन् ।
अहिले गाायक रेमो याज रैन घर्ती मगरले प्रवाश मलेसियाबाटै दर्जन बढी गीतहरुमा आफ्नो अावाज दिर्इ सकेेेका छन भने आधा दर्जन भन्दा बढी गीतकाे लय र सब्द गरेका छ्न। यसै क्रममा रेमोले अबको केहि दिनमा अर्को नयाँ लोक दोहोरी नामक गीत “फुल फुल्दै” ल्याउने तयारीमा रहेका छन् ।
अब अाउने यस एल्बमको म्युजिक भिडियो मलेसियाको विभिन्न रमणीय ठाउहरुमा सुटिङ भइसकेकाे र गितको भिडियोमा रिता तामाङ र उनै गायक रेमो याज रैनले पनि मोडेेलको रुपमा अभिनय गरेका छन । “फुल फुल्दै” नामक यस गीतमा चर्चित सर्जक तथा संगीतकार अमृत बाबु रोकायको सुमधुर लय र राजेन्द्र चेपाङको सब्द रहेको छ ।
गीतमा रेमो याज रैन घर्ती मगर, राजेन्द्र चेपाङ र यसाेधा कार्कीले अावाज दिएका छन । देब बोहराले निर्देशन गरेको यो म्युजिक भिडियोको छायांकन फुर्बा दोर्जे मोक्तान तामाङले गरेका छ्न ।
उनिहरु भन्छन् “गीतकाे म्युजिक भिडियाे अन्तिम चरणमा पुगेकाे छ । प्रतिक्षा गर्नुहाेस् केहिदिनमै सार्वजनिक गर्छाैँ ।”